Somaliyaa magaala Moqaadishootti Boombiin nama 300 ol ajjeese - Gaachana Sabaa
Boombiin sanbata darbe Somaaliyaa magaala Moqaadishoo bakka lamatti dhuka’e lubbuu namoota 300 ol ajjeese.
Sanbata eegaa gochi suukkanneessaan kun uumamee booda duuti guyyaa guyyaan dabalaa deeme, yeroo dhaabbatni shororkeessaa tokkolleen itti gaafatama hin fudhannetti.
“Namni 300 du’uu isaa mirkaneessineerraa,duuti namaa lakkoofsaan dabaluu ni malaa sababni isaas namoonni hanga ammaatti hin argamne jiruu”Abdikadir Abdirahman, daayrektariin tajaajila Ambulaansii magaala Moqaadishoo akkas jechuun dhaabbata Reutersiif himan.
Polisiin akka jedhetti,dhoo’insi jalqabaa Safari Hotel funduratti karaa K5 irratti yeroo tahu kan lammaffaa ammoo sa’atii lamaan booda aanaa Madiinaa keessatti dhoo’e.
Doktariin Hospitaala Madiinaa Aden Nur jedhamu du’a nama 258 galmeessuu isaanii yeroo himan Narsiin biraa achuma Hospitaala biraa irraa Reenfa nama shanii garasitti erguu isaanii Reutersiif himaniiru.
Obbo Nur akka jedhanitti namoota du’an keessaa 160 guutummaatti waan gubataniif eenyummaan isaanii adda baafamuu hin danda’amnee jedhan. Kaleessa Mootummaa dhaan akka awwalamanii fi warri kaan ammoo warra isaaniitiin akka awwaalaman,Namoonni dhibbaa ol tahan madoonis asitti fidaman jedhanii Reutersiif Hospitaalatti himan.
Warri akka hamaatti madaa’an Xiyyaara Turkiitiin fuudhamanii tajaajila wayyaaf akka deeman angawoonni dubbataniiru.yeroo dhoo’insi kun oduu irratti dhagahamu Turkiin akka gargaarsa fayyaa hanga biyya isaaniitti kennitu ibsamee ture.
Somaaliyaan Dhoo’insa guddaa hanganaa eegaa Al shabab dhalate irraa kaasee hanga ammaatti isa guddaa fii hamaa dha. Piresidentiin Somaaliyaan Farmajoon gadda guyyaa sadii labsanii warra dhiiga gumaachuuf dhufan walii tahuun lammiilee isaaniitiin akka dhiiga kennuun ummata isaanii gargaaran iyyatan.
Namoonni haala hamaan madaa’an wiixata gara dirree xiyyaarraatti geeffamanii akka gara Turkiitti balali’an yaalii addaatiif beekameera.
Turkiin ji’a kana keessa Somaliyaa keessatti mooraa waraanaa guddaa banachuu ishee ni yaadama. Qubannaa isaanii kun tajaajila waraana Somaaliyaa lenjisuu fi gargaarsa adda addaa kennuu dha.
← Death toll from Mogadishu twin truck bombing rises to more than 300 people-Somalia attack
Namoonni qabsoo Oromoo gufachiisuuf bobba’an 7 qabaman. →
Prezident Mugaben humna waraanaan to’atamanii jiru.
November 15, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Prezident Mugaben humna waraanaan to’atamanii jiru.
November 19, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Partiin Angoo irra jiru Mugabe misensummaa isaa irraa mulqan.